Gudoomiyaha cusub ee maxkamada sare oo muqdisho lagu dhaariyay. – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Ahmed weheliye Gaashaan 29 May 2018 29 May 2018
Muqdisho ( Mareeg News ) Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa ka qeybgalay munaasabad lagu dhaarinayay Guddoomiyaha cusub ee Maxkamadda Sare oo ka dhacday Xarunta Madaxtooyada, maalin kaddib markii uu magacaabay, isla markaana xilka ka qaaday Guddoomiyihii Maxkamadda Sare ee xilkaas hayay Ibraahim Iidle Suleymaan.
Munaasabadda dhaarinta ayaa waxaa ka qeyb galay Guddoomiyaha Golaha Shacabka, Ra’iisul Wasaare kuxigeenka, Wasiirka Cadaaladda, xubno ka socday Hey’adaha Garsoorka iyo Mas’uuliyiin kale.
“Muddooyinkii la soo dhaafay dadkeennu waxa ay ka hadlaayeen caddaalad darro dhinac walba ah oo baahsan. Waxaan ku samaynaynay daraasad meesha dhibku ka taagan yahay iyo xaaladda dhabta ah ee ka jirta dalka. Waxaa noo soo baxday in loo baahan yahay dib-u-habayn, dib-u-habayntaasina maanta ayay bilaabatay, waxaana noogu xigi doona in aan dhisno Golaha Adeegga Garsoorka”ayuu yiri Madaxweyne Farmaajo.
Dhaarinta Guddoomiyaha cusub ee Maxkamadda sare ayaa ku soo aadeysa, iyadoo uu qaadacay xil ka qaadistii lagu sameeyay Guddoomiyihii Maxkamadda sare, isla markaana ku tilmaamay mid sharciga baal marsan, waxaana dhaarinta Guddoomiyaha cusub u muuqataa mid degdeg ka muuqata.